Yena yedwa okhulise izingane ezimbili, wasebenza kanzima futhi wakwazi ukuthola izidingo. Futhi cishe iminyaka engama-45 - lapho uqala khona okuthile okusha, njengokungathi sekwephuzile - ngibhala incwadi yami yokuqala. Futhi kusukela ngaleso sikhathi waqala enye impilo ...
... Incwadi kaBarbara Cher "Ukuphupha akuyona eyingozi" iminyaka engama-35. Lokhu kuhunyushwa ngesiRussia okokuqala, kodwa kwamanye amazwe kusengcono kakhulu. Futhi ngani? Ngakho-ke, kubonakala sengathi izizukulwane ezintsha zingaphansi kwalabo abedlule zidinga umuntu ukuba anake amaphupho abo, izifiso zabo ezingacacile nezifiso futhi baphakamise ngokucacile ukuthi bangaziphendulela kanjani, ukuthi bangayithola kanjani indawo yabo. Sikhuthaza wena okwamanje ukuba wenze izivivinyo ezinhlanu ezisuka encwadini nguBarbara Cher "Ukuphupha akuyona eyingozi", okuzokusiza ukuthi ubone into oyithandayo.
Ukuzivocavoca 1: Buyela ebuntwaneni
Wonke ama-gurus okuya kuwo aguqula into eyodwa: iningi labantu linamakhono okuthola imbangela ethile ebusheni bakho. Yiqiniso, njengengane, umuntu akakwazi ukusho ngokuqinisekile ukuthi ufuna ukuba ngumqambi we-hadronic collider, kodwa, cishe, ubonisa isithakazelo ekuqalisweni kwento ethile. Khumbula ukuthi yini othanda ukuyenza kakhulu ebuntwaneni bakho? Mhlawumbe uthande umdwebo, noma ngabe uyathandwa yizindiza, noma mhlawumbe uthanda ukuza nemidlalo emisha? Umbukeli we-TV owaziwa kakhulu u-Oprah Winfrey, isibonelo, uyakuthanda ukutshela ukuthi, ebuntwaneni bakhe, wabeka amadonsa ngokulandelana futhi waxoxa nabo. Bhala okungenani ama-five sessions owawuthanda ukwenza njengengane. Uma ungeke ukhumbule, buza umama wakho, ubaba, umfowabo omdala, umalume noma ukanina.
Ukuzivocavoca 2: 20 imisebenzi ozithandayo
Isihluthulelo sekusasa lakho siqu ngokuqinisekile ngomsebenzi othile ozithandayo. Okusho ukuthi, ukuya kwakho nje ngeke kube uhlobo oluthile lwezinto, okusho kuwe, ukuthi kuyinto enyanyekayo. Thatha ishidi nopeni bese ubhala imisebenzi engu-20 oyikhonzile. Ngaphezu kwalokho, lolu hlu lungabandakanya ngisho nalawo makilasi abonakala sengathi u-banal (isibonelo, "udle okumnandi"). Izifundo kufanele zibe okungenani 20. Emva kokuba uhlu luhlanganiswe, kudingeka wenze izinto ezimbili. Okokuqala: ukuthola amaphetheni. Bheka, yiziphi izinkomba ezihola ohlwini lwakho? Mhlawumbe kungukuthi okuhlobene nokusiza abantu noma uhlobo oluthile lwemisebenzi yezemidlalo? Noma, mhlawumbe, uyaqonda ukuthi uyathandwa ukupheka? Futhi into yesibili yokwenza nalolu hlu. Zibuze: yikuphi lokhu konke engikulungele ukutadisha ngokuningiliziwe. Isibonelo, ubhale: "Ngithanda ikhofi yokuphuza." Ukulungele ukufunda ngokucophelela isiko lekhofi, izinhlobo zekhofi nokunye. Uma kunjalo, mhlawumbe, injongo yakho, ngempela, ihlobene nokudala i-franchise ekhethekile yekhofi.
Ukuzivocavoca 3. Ongazungezayo
Cabanga ngalesi simo: unelungelo losuku olulodwa ukuzungezile nabantu abanjalo oyifunayo. Uvuka ekuseni futhi idolobha ligcwele abantu ngaphansi kwesicelo sakho. Luhlobo luni lwabantu oluyoba yilo? Iziphi izimfanelo okufanele zibe nazo? Mhlawumbe ufuna ukuzungezwe abantu ngaso sonke isikhathi, "Einsteins", noma "Dalai Lama"? Noma ufuna ukubona abalingisi, abaculi, abaculi endaweni yakho? Ukhuluma ngani nalaba bantu? Kungani unesithakazelo kuzo? Khumbula ukuthi imvelo iyinto ebalulekile ekusungulweni kwekusasa lakho.
Ukuzivocavoca 4. Amaphilo amahlanu
Enye yokuzivocavoca. Cabanga ukuthi unemipilo emihlanu. Futhi ngamunye wabo ungaphila wedwa, kodwa ngazo zonke izidingo udinga ukunikeza umsebenzi owodwa. Yiziphi izisebenzi ezizobe zikhona? Ngokushesha nje uma wenza lo msebenzi, uzobona ukuthi kukhona amathalenta amaningi kuwe futhi, ngokuqinisekile, uzokhetha ukuthi bonke abahlanu baphile umsebenzi ohlukile ngokuphelele. Kungenzeka ukuthi ukugijimela kuzovela kumsosayensi onzulu omkhulu kuya kumculi we-pop. Futhi lokhu kuyinto evamile ngokuphelele! Ngokwesibonelo, u-Albert Einstein, njengoba eyaziwa, wayengesiyena kuphela ochwepheshe be-physicist, kodwa futhi no-violinist ohlakaniphile! Wadlala i-violin kusukela ebuntwaneni kanti ngezinye izikhathi wakhuluma ngisho nabafundi bakhe.
Ukuzivocavoca 5. Usuku olunama-5+
Futhi manje ake sicabange: uyini usuku lwakho oluhle? Udinga ukuhamba ngomcabango wakho futhi uqonde ukuthi usebenza nobani phakathi nosuku lwakho oluhle? Uvukaphi? Uzigqoka ini? Uya kuphi kuqala? Uyini imicabango yakho emini. Cabanga ngalolu suku ngemininingwane egcwele. Ungagcini umcabango wakho. Kuhle! Futhi manje masenze lokhu okulandelayo. Kuzodingeka ukuthi uhlukanise amaphupho akho osukwini oluhle ube yimikhakha emithathu: "yini edingekayo ngempela," "yikuphi okushiwo ngenhla kuyadingeka, kodwa akudingekile," futhi "ukuxubha." Isigaba sokuqala sezindaba, izinto nemisebenzi kuzokubonisa ukuthi yini ebaluleke kakhulu kuwe nokuthi kuphi okumele kufihlwe khona. Mayelana nazo zonke izivivinyo ngokuningiliziwe nangendlela yokufeza imigomo, ungathola encwadini ethi "Ukuphuka akuyona eyingozi"
Umbuso wosuku lwezingane zokukhula okuqala
Izinkinga zezingane ezivela emndenini omkhulu
Amathoyizi ahlakaniphile wengane yakho
Ungakhetha kanjani umfana?
Izinkinga zomuntu othandekayo
Imiqulu ekhejiwe ye-Pelmeniki
Indlela yokugqoka i-turtleneck futhi ubuke zanamuhla: izibonelo ezinhle kakhulu zezithombe zefashini nezitayela ngezithombe
Yiziphi i-migraines, izimpawu, izindlela zokwelashwa?
Amantombazane, uyathanda yini abafana abashadile?
Ingabe kufanelekile ukugcina ubuhlobo obubuhlungu, kodwa obujwayelekile?
Izindabakwane zonyaka omusha zamazwe ahlukene
Ukudla kwelayisi, ukuqedwa kwezinto ezinobuthi
I-TOP-10 i-blowjob yocwaningo
Izitayela zezinwele ezithandwayo zabantwana abafana